UNzimande uchaza ngeyamahhala - Isolezwe | IOL.co.za
News Business Sport Motoring Tonight Lifestyle Travel SciTech Blogs Newspapers Classifieds Property Jobs Isolezwe Home Izindaba Ezokungcebeleka Ezemidlalo Intandokazi Ezemisakazo Ezezimoto UNzimande uchaza ngeyamahhala
June 29 2012 at 02:25pm By SAPA
INTATHELI YESOLEZWE UNGQONGQOSHE wezeMfundo ePhakeme, uMnuz Blade Nzimande, (osesithombeni) uthe, imfundo yamahhala kubo bonke abafundi abahlwempu kumele kube yinto egqamayo kungekudala. UNzimande izolo uthe kuningi osekuvele sekwenziwe okuyimizamo yokunqanda isimo sokuswelakala kwemali kubafundi abahluphekayo abasemazingeni emfundo ephakeme. Usho lokhu ephendula incwadi yezikhalo ebibhalwe ngabafundi benhlangano iSouth African Students' Congress (Sasco) ethi kumele kube nemfundo yamahhala kuleli kubafundi abahluphekile. “Imali-mboleko nemifundaze esingethwe ngabakwa-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) sekweluliwe kule minyaka emithathu edlule,” kusho uNzimande. Ukuxhasa isikhwama esibolekisa ngemali nemifundaze kuphindwaphindwe kathathu kusuka ku-R2.3 billion ngo-2008 kwaya ku-R6 billion ngonyaka odlule. Isamba semali sika-R50 million sabekwa eceleni sabelwa ukisiza ama-Post Graduates kwathi u-R63 million wabelwa ukusiza abafundi abakhubazekile. ISasco inxuse ukuba kube nemfundo yamahhala ezoxhaswa yimali yentela ekhokhwa yimiphakathi yaseNingizimu Afrika. Ifuna nokuthi amanyuvesi ayeke ukubamba imiphumela yabafundi abasuke bengakwazi ukukhokha imali yabo yokufunda. Le nhlangano yabafundi ifuna nokuthi kuhlakazwe uMkhandlu ophethe inyuvesi yaseFree State. Ifuna nokuthi uNzimande abambe elikhulu iqhaza ekuguqulweni kwezikhungo zemfundo ephakemene. “Nathi sihambisana nemibono yeSasco uma ikhuluma ngokuthuthukiswa kwezimo zenhlalo nemfundo kubafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme nasemanyuvesi,” kusho uNzimande. Uthe yize kunjalo, imali yokufunda ihlonzwa yimikhandlu yamanyuvesi okuyiyo eshoyo ukuthi kumele kube yimalini, uNgqongqoshe weMfundo akangene lapho. – Intatheli yeSolezwe Comment Guidelines
IOL / Isolezwe / UNzimande uchaza ngeyamahhala We like to make your life easier